Nchịkwa nke ụlọ ahịa na weebụ Watch-edition.ru na-eme ka nkwenye zuru ezu nke ozi natara site na ndị ọrụ edebara aha. Ndokwa nile nke iwu nchebe ma na-arụ ọrụ na ndị ahịa dabeere na ụkpụrụ iwu na omume nke Russia.
Ihe niile ị dekọtara na ndebanye aha ga-echekwa na nchekwa data nchekwa. Shop Online Watch-edition.ru emesi zuru confidentiality na ogbugbu nke iji, na ihe banyere ndị ahịa ozi ga-eji naanị maka ogbugbu nke na-abata iwu.
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla ma ọ bụ ajụjụ banyere ikike, ndebanye aha n'ime ụlọ ahịa - biko kpọtụrụ anyị email address info@watch-edition.ru anyị na-enyere gị aka!
Ndị nnọchiteanya nke ụlọ ahịa na weebụ Watch-edition.ru agaghị ajụ gị maka nkọwa kaadị plastic ma ọ bụ nkọwa nzuzo ndị ọzọ.
1. Ụfọdụ ihe etinyebere na saịtị ahụ bụ ikike ọgụgụ isi nke ụlọ ahịa weebụ. Watch-edition.ru. A machibidoro ihe ndị dị otú ahụ na-enweghị nkwenye nke ndị nwe ụlọ.
2. Na weebụsaịtị nke ụlọ ahịa na weebụ Watch-edition.ru enwere njikọ ndị na-enye gị ohere ịga na saịtị ndị ọzọ. Anyị enweghị ọrụ maka ozi a bipụtara na saịtị ndị a, anyị na-enyekwa ha njikọ naanị iji mee ka ndị ọbịa gaa na saịtị gị dị mma.
1. Shop Online Watch-edition.ru ana achi achi na-enweghị ihe ọmụma ị na-enye agaghị na n'okpuru ọnọdụ ọ ga-nyere ka ndị ọzọ, ma e wezụga na mgbe kwuru na ugbu a iwu nke Russian Federation.
2. N'ọnọdụ ụfọdụ, ụlọ ahịa na-edebe ihe ntanetị Watch-edition.ru nwere ike ịjụ gị ịdebanye aha ma nye ozi nkeonwe. A na-eji ozi a nyere naanị mgbe ị na-edozi iwu na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ iji nye onye ọbịa ohere ịnweta ozi pụrụ iche.
4. Na iji nye gị na ozi kpọmkwem ụdị online store Watch-edition.ru na nkwenye gị n'ezoghị nwere ike zigara kpọmkwem e-mail address ndebanye ozi ozi. Mgbe ọ bụla oge i nwere ike wepu aha na.
Maka ajụjụ niile gbasara ịkwado ụkpụrụ nchekwa, nwebisiinka na ikpe ndị ọzọ - biko kpọtụrụ nchịkwa saịtị na info@watch-edition.ru